Ummanni Oromoo Abbootii Gadaa isaa filatee tokkummadhaan qabsoo finiinsaa jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosUmmanni Oromoo Abbootii Gadaa isaa filatee tokkummadhaan qabsoo finiinsaa jira.
Naannoo Hararii aanaa Dirree Xayyaaraa kana keessa oolee! Harariin nu hin bulchitu! Harar teenya! Lafa teenya irraa hin buqaanu! Ummanni Oromoo Abbootii Gadaa isaa filatee tokkummadhaan qabsoo finiinsaa jira.